Summary of books in Nepali / "Food Fix" नेपालीमा सारांश - LweoNepal
Summary of books in Nepali / “Food Fix” नेपालीमा सारांश
Posted on: August 28, 2020 Last updated on: September 14, 2020 Comments:0Categorized in: Recent Posts by Subscribers, वातावरण Written by: Admin
Summary of the book “Food Fix” in Nepali
सारांश: Food Fix
“Food Fix” पुस्तकले हामिले खाने प्रकारका खाना हाम्रो र हाम्रो ग्रहको लागि खराब छ र यी समस्याहरू समाधान गर्न हामी प्रत्येकले केके गर्न सक्दछौं भनेर वर्णन गर्दै, यस पुस्तकले हामीलाई स्वस्थ खान र वातावरण सुधार गर्न उत्प्रेरित गर्दछ।
माटो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबै भन्दा बेवास्ता गरिएको समाधान हो, जसले हाम्रो गलत खाना प्रणालीलाई सुदार्न सक्छ।
हामीले खाने खानाको कारण बढ्दो रोगहरूको समाधानका लागि लाग्ने स्वास्थ्य लागत अत्यादिक छ। विशेषज्ञहरूको अनुमान अनुसार, आगामी years 35 बर्षमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र स्वास्थ्य बिरामीको लागि लाग्ने लागत $९५ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी हुनेछ।
धेरै हदसम्म, यी अवस्थाहरू खराब खानाबाट आउँदछन्। तथाकथित “औद्योगिक पौष्टिक आहार” विश्वभर फैलिएको छ, र स्वास्थ्य सेवामा यसको लागत क्वाड्रिलियनमा हुन सक्छ।
तर यो यहि मात्र रोकिदैन। हामीले खाने तरिकाले CO2 उत्सर्जनमा योगदान पुर्‍याउँदै र ईकोसिस्टमहरू मार्दै हाम्रो ग्रहलाई बर्बाद गरिरहेको छ।
हामीले के खायौं यसले ग्रहमा नकरात्मक प्रभाव पार्छ र ग्रहलाई हामीले गरेको नोक्सानीले हामीले खाने खानालाई असर गर्छ। यो सबै धेरै डरलाग्दो सुनिन्छ, हैन र ?
Dr. Mark Hyman’sले लेखेका Food Fix: How to Save Our Health, Our Economy, Our Communities, and Our Planet–One Bite ataTime पुस्तकद्वार हामीले, यस खाद्य संकटको उत्पत्ति र यसको समाधानको बारेमा जान्ने मौका पाउछौं।
यहाँ केही महत्त्वपूर्ण पाठहरू छन् जुन मैले यो पुस्तकबाट सिकेः
आज संसारमा घटिरगेका ठूल्ठूला समस्याहरु, खराब खाना को नतिजा हो।
ठुलो व्यवसायहरुले हामीलाई विश्वव्यापी वातावरणीय प्रकोपमा पुर्‍याइरहेको छ।
पुनर्जन्मकारी खेती र नवीन अभ्यासहरूले हामीलाई समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ, यदि हामी सबै मिलेर काम गर्छौं भने।
तपाइँको खानामा के चिज गलत छ भन्ने ठीक गर्न तयार हुनुहुन्छ, अाउनुहोस् ?
पाठ १: हामीले सामना गर्ने सब भन्दा ठूला चुनौतिहरू हामीले खाने खानेकुरा हो।
जब हामी समाचारमा हेर्दछौं, हामीले सजिलैसंग संसार भत्किरहेको महसुस गर्न सक्छौ। अाज संसारमा द्वन्द्व, बढ्दो मृत्यु दर, अनिकाल, बरफ पग्लिरहेको ,र महत्त्वपूर्ण प्रजातिहरूको विलुप्त हुने जस्ता समस्याहरु देखा परेको छ।
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यी सबै समस्याहरूको केन्द्रबिन्दु हाम्रो खाना हो।कसरी ? अाउनुहोस् आजको समयमा देखा पर्ने संकष्टहरू हेरौं: संसारभरि मृत्यु, बिमारी र अशक्तता, यि सब समस्याको मुख्य कारण भनेको पोषण युक्त डाइट को कमि हो।
Ultra Processed र चिनीले भरिएको खाद्य पदार्थहरूको प्रशस्तता मधुमेह, हृदय रोग, र क्यान्सरको वृद्धिको लागि जिम्मेवार छ, र यसले प्रत्येक बर्ष लगभग ५० million मानिसलाई मार्दछ।
संसारमा अर्को समस्या भनेको असमानता/inequality हो। कम आय भएका परिवारहरूले यी खाद्य पदार्थहरू खाने अधिक संभावना हुन्छ, र यस्ता Ultra Processed र चिनीले भरिएको खाद्य खाएर हुर्केका बच्चाहरू कुपोषणबाट ग्रस्त हुने बढी सम्भावना हुन्छ। कुपोषणको वृद्धि मात्र होइन यस्ता खानाले बौद्धिक विकासमा पनि बाधा पार्दछ। यसले असमानताको चक्रलाई झन बडावा दिन्छ।
ठूला कृषि व्यवसायहरूले मानिसहरूलाई तिनीहरूको जग्गा र परम्पराबाट टाढा लैजान्छन्, जसले उनिगरुलाई हानिकारक खाना खाने र खेती नगर्न उत्प्रेरित गर्दछ। यी सबै आजको संसारमा ठूला चुनौतिहरू हुन्, तर सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वातावरणीय क्षति हो जुन हामी अर्को पाठमा अन्वेषण गर्नेछौं।
पाठ २: बजार भूमण्डलीकरणले हामीलाई तत्काल जडानहरूको विशाल विश्व दिएको छ।
हाम्रो आमाबुवा र हजुरबा हजुरआमाको समयमा, व्यक्तिहरू कुनै उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्नका लागि ज्ञान र कला जम्मा गरेर पैसा कमाउँथे । तिनीहरूलाई चाहिने सबै शिक्षा वा एउटा व्यापार सिक्नु थियो र तिनीहरूलाई जीवनका लागि रोजगार सुरक्षित गर्न सकिन्छ। आज, कुराहरु अधिक फरक हुन सक्दैन। वाणिज्य र जानकारी को ग्लोबल प्रवाह छिटो परिवर्तन र आज ठूलो सफलता संग एक उत्पादन भोली कल पुरानो समाचार हुन सक्छ।
नतिजाको रूपमा, मानिसहरू जलवायु परिवर्तनको कारण विस्थापित भइरहेका छन् जुन खडेरीमा पर्ने छ, वर्तमान बसाईको दुई तिहाई हिस्सा। हामी स्रोतहरूको बाहिर दौडिरहेका छौं र जनसंख्या मात्र बढ्दैछ। थप व्यक्तिको अर्थ अधिक घरहरू, भोजन र बिजुली खपत, र अझ बढी कार्बन फुटप्रिन्टको हुन्छ।
यो सबै राम्रा विकराल देखिन्छ, तर फ्राइडम्यानले हामीलाई आशावादी हुने कारण दिन्छ। दुबै टेक्नोलोजी र भूमण्डलीकरणले सबैलाई इन्टरनेटमा पहुँच प्रदान गर्दछ जसले हामीलाई परिवर्तनहरू व्यवस्थित गर्न र भविष्यको बारेमा निर्णय लिनको लागि सँगै काम गर्न अनुमति दिन्छ। अब हामी यी खतराहरू सम्बोधन गर्न विश्वभर सहयोग गर्न सक्छौं।
उनी पनि साझेदारी गर्छन् कि यी परिवर्तनहरूले हामीलाई साझा राम्रोको लागि काम गर्न मद्दत गर्दछ। उनले मिनेसोटामा रहेको आफ्नो गृहनगर सेन्ट लुइस पार्कको उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरे। उनले देखे कि यो सेतो एन्टी-सेमेटिक स्थानबाट प्रगतिशील र बहुसांस्कृतिक समुदायमा परिर्वतन भएको छ।
विजनरी क्षेत्र नेताहरूले अगाडि देखिने सामाजिक नीतिहरू निर्माण गरे र मध्यम वर्ग र स्कूल प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याए। जब व्यक्तिहरूले एक अर्कालाई समस्याको साथ सहयोग गरे, निराशावाद र पूर्वाग्रहहरू विघटन भएको देखिन्थ्यो। हामी सबै यसबाट लिन सक्छौं कि मानव सहयोगले राम्रोको लागि काम गर्न हामी भविष्यलाई बचाउन सक्ने तरीका हो।
Tagged as: book summary in nepali summary of book summary of book food fix in nepali summary of the book food fix in nepali summary of the book in Nepali वातावरण
Previous Post Summary of books in Nepali / “Dark Money” पुस्तकको/नेपालीमा सारांश
Next Post Summary of books in Nepali / “Own Your Everyday”पुस्तकको नेपालीमा सारांश